Madaxweyne Farmaajo oo gaarey dalka Jabuuti
Madaxweyne Farmaajo oo lagu soo dhaweeyay dalka Jabuuti
JABUUTI - Madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaarey dalka Jabuuti, oo noqonaysa lugtii ugu dambaysay booqashadiisa gobolka Geeska Africa.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa si diirran ugu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Jabuuti, Mas’uuliyiin ka tirsan dowladda dalkaasi, waxaana loo galbiyay aqalka madaxtooyadda.
Waxaa lagu wadaa in uu kulan la yeesho dhigiisa dalkaasi Iscmaaciil Cumar Geelle, oo ay kawada hadli doonaan arrimo dhowr ah oo ay kamid yihiin xiriirka iskaashi ee labada dalka iyo dagaalka Al Shabaab.
Madaxweyne Farmaajo oo shalay kula hadlay Saxaafadda magaalada Addis Ababa, ayaa sheegay in safarkiisa uu salka ku hayo sidii loo dar-dar gelin lahaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab isla markaasna loo midayn lahaa qorshayaasha wadamada geeska Afrika ee ay ku wajahaayaan ka hor-tagga khatarta argagixisada.
Farmaajo ayaa xalay kulan xasaasi ah kula qaatey Addis Ababa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desaglen, kaasi oo looga hadlay amniga gobolka iyo sidii loo wiiqi lahaa awoodda Al Shabaab. Halkan ka akhriso Warbixinta.
Booqashada Madaxweynaha ee dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya, ayaa kusoo beegmaysa xilli ciidamada AMISOM ay billaabayaan sanadka soo socda ee 2018-ka ka bixitaankooda dalka.
Howlgalka AMISOM oo billowday 2007 ayaa waxaa lagu wadaa in lasoo afjaro sanad kadib, iyadoo wali Al shabaab ay ku xoog badan yihiin qeybo kamid ah Soomaaliya, oo weeraro ka fulinayaan Muqdisho.
Farmaajo oo Safarka Deg Dega ah ku tagaya dalalka Dariska
Soomaliya 22.10.2017. 11:24
Madaxweyne Farmaajo, ayaa maalmahan soo aadan Safarka Deg Dega ah ku tagaya dalalka Dariska, kadib markii...
War-murtiyeed laga soo saarey Shirkii Kampala [Sawirro]
War Saxaafaded 03.03.2018. 10:17
Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay dhigiisa Jabuuti [Sawirro]
War Saxaafaded 20.02.2019. 15:40
Madaxweyne Farmaajo oo booqday Wasaaradda Gaashaandhigga
Soomaliya 07.11.2017. 18:48
Farmaajo oo ka degay Jabuuti kadib socdaalkiisa Burundi [Sawirro]
Soomaliya 19.02.2019. 23:45
Wufuud ku wajahan Muqdisho iyo wadooyinka oo la xiray
Soomaliya 17.10.2018. 10:30
Farmaajo iyo Geelle oo wahadal Taleefonka ah yeeshay
Soomaliya 08.09.2018. 23:28